Manahaka an'i Jesoa Kristy - Mana isan andro
Manahaka an’i Jesoa Kristy
» KOA AMIN’IZANY DIA AOKA HANAHAKA AN’ANDRIAMANITRA IANAREO TAHAKA NY ZANAKA MALALA » Efesiana 5:1
Raha toa ka mihevitra tokoa isika fa efa naterak’ANDRIAMANITRA RAY amin’ny alalan’ny FANAHINY dia tokony hanana ny natioraNY sy ny fombafombaNY.
ANDRIAMANITRA dia marina sy masina ary tsara.
Ahoana moa no mbola misy itovizantsika amin’ny fanaon’izao tontolo izao: lainga, fanompo-tsampy,fitiavan-karena, fitiavam-boninahitra, fiazakazahana fitadiavana harena mora lo, fijangajangana, fanarahana lamaody, tsy finoana, fatahorana, tsy fanantenana, tsy famelan-keloka, fankahalana….mbola maro tsy voatanisa…
Ny alika tsy miteraka saka ary ny saka tsy miteraka alika.
Noho izany ANDRIAMANITRA dia tsy afaka miteraka hafa tsy zanaka marina sy masina. Zanaka mitafy ilay olom-baovao:
izay niala tamin’ny fanaony taloha,
taminy mbola niainany fiainana jentlisa,
mba handehanany araka ny lalan’ny Rainy, hanatanterahana ny sitrapoNY rehetra.
Ankaterena sa avy amin’ny fo?
-Tsy nisy niteny t@Zakaiosy mihitsy hoe "amidio ny fanananao dia...
Tany @Test taloha dia ilay tempoly naorin'i Solomona tao Jerosalema...
Fahiny izahay dia nampianarina hoe toy izao no famaky ny...
IIKorintiana 5.14-15 ...MATY ny Anankiray hamonjy ny olona rehetra, ka...
Ny tena fitiavan'i Kristy? ...
Tany @Test taloha dia ilay tempoly naorin’i Solomona tao Jerosalema no atao hoe « tranon’Andriamanitra » tsy misy ankoatra io raha ny Tenin’Andriamanitra no jerena! Ary tao Andriamanitra no nitoetra hatramin’ny andron’i Jesosy! …